Ulawula njani iPC yakho ukude | Iindaba zeGajethi
Uyilawula njani iPC yakho ukude
Ngaphambi kokugcinwa kwilifu kuye kwathandwa, ekuphela kwendlela yokuqhubeka nokusebenza ukusuka kwenye indawo yayikukuvumelanisa yonke idatha kwikhompyuter yethu nge-pendrive, ubuncinci into esaziyo ukuba sinokuyidinga, indlela engasetyenziswanga enkosi kwiinkqubo zefu yokugcina.
Nangona kunjalo, ayisosisombululo sayo yonke into, ngakumbi xa sikwinkampani yethu, sisebenzisa eyethu inkqubo yolawulo, inkqubo enganikeli ithuba lokudibanisa kude okanye elininzi kakhulu ukuba lingene kwisivumelwano sokusebenzisa ngokungacacanga. Kule meko, isisombululo kukunxibelelana ukude.
Ekuphela kwento kodwa esiyifumanayo kwimeko yokunxibelelana ukude kukuba kufuneka izixhobo zibekho ngalo lonke ixesha, okanye ekuphumleni, ukuze unxibelelwano lube nakho ukusekwa xa sithumela isicelo soqhagamshelo. Oku kungasombululwa ngokulula ngokwenza kunye nokucima izixhobo zethu kude, ukwenzela ukuba ivulwe xa sisazi ukuba siyisebenzisa kanjani.
Xa uqhagamshela kude, kuzo zonke iimeko sidinga usetyenziso ezimbini, enye esebenza njengomthengi, leyo siyifaka kwikhompyuter ukusuka apho siza kudibanisa khona, kunye nenye esebenza njengeseva, leyo siyifaka kwi ikhompyuter sifuna ukuyilawula kude.
Ayizizo zonke izicelo esizibonise apha ngezantsi ezenzelwe ukuba zisebenze ngokude nenye ikhompyuter zisisebenze ngokufanelekileyo kulo msebenzi. Nje ukuba sicacelwe ukuba zonke ezi zicelo zisebenza ngokupheleleyo, inyathelo elilandelayo kukuzibuza ukuba ingaba ikulungele na ukubiza imali (ayizizo zonke ezisimahla).
1 Iinkqubo zedesktop ekude zePC kunye neMac
1.2 I-desktop desktop
1.3 I-desktop ekude yeWindows
1.4 Nayiphi na idesika
1.5 Umphathi weDesktop ekude
1.6 Iperus Desktop ekude
Iinkqubo zedesktop ekude zePC kunye neMac
Igama leQela lokuHlola linxulunyaniswa nonxibelelwano olukude lweekhompyuter kuba iikhompyuter zaqala ukufika emakhaya. Le nkonzo yenye yezona zinto zaziwayo nezinezinto ezininzi esinokuzifumana kwimarike, kuba ayisivumeli kuphela ukulawula iqela kude, kodwa ikwasivumela ukuba sithumele iifayile phakathi kwamaqela, incoko yokunxibelelana namanye amaqela .. .
Ukusetyenziswa kwesicelo kukhululeke ngokupheleleyo kubasebenzisi babucala, kodwa hayi kwiinkampani, iinkampani ezinezicwangciso ezahlukeneyo ezikhoyo ngokuxhomekeke kwinani leekhompyuter esifuna ukunxibelelana nazo. IQela lokuJonga, liyafumaneka zombini IiWindows njengeMacOS, iLinux, iChannelOS, iRaspberry Pi, iOS kunye ne-Android.
Ulawulo lweQela loVavanyo lweQela
Ulawulo lweQela lokujonga kudeMahala
Isisombululo esisifumana kuGoogle sesona silula kuzo zonke, kwaye sisivumela ukuba silawule ikhomputha kude, kwenye ikhompyuter (iPc / Mac okanye iLinux) okanye nakwesiphi na isixhobo esiphathwayo ngesicelo esihambelanayo. Idesktophu ekude kaGoogle Chrome Ayikho enye into ngaphandle kokongezwa ekufuneka siyifakile ngqo kwi Ivenkile yeWebhu yeChannel kuGoogle Chrome.
Nje ukuba siyifakile, kufuneka sisebenzise ulwandiso kwikhompyuter apho sifuna ukubaxhuma khona kwaye sikope ikhowudi eboniswe sisicelo. Kwikhompyuter esiza kuqhagamshela kuyo, siya kungenisa loo khowudi ukuze simisele unxibelelwano. Nje ukuba simisele unxibelelwano, sinokuyigcina kwikhompyuter yethu ukuze sikwazi ukudibanisa kwixesha elizayo.
Idesktophu ekude yeChannel ayihlawulelwa kwaphela kwaye ifuna unxibelelwano oluzinzileyo ukuze lusebenze (kunxibelelwano lwe-ADSL alusebenzi kakuhle, masithi).
Idesktophu ekude yeChannel
Idesktophu ekude yeChannelMahala
I-desktop ekude yeWindows
Isisombululo esisinikwa nguMicrosoft asifumaneki kuzo zonke iinguqulelo zeWindows, kuphela kwiinguqulelo zePro kunye nezoShishino ukunxibelelana ukude. Ukusuka kwikhompyuter yomthengi sinokunxibelelana ngaphandle kwengxaki Windows 10 Uhlobo lwasekhaya. Nje ukuba senze lo msebenzi, ukuze siwusebenzise, ​​kufuneka ikhutshelwe kwivenkile yeWindows yeWindows, ii-macOS, i-iOS kunye ne-Android usetyenziso olufanayo.
Ungasebenzisa umxhasi weMicrosoft yeDesktop ekude ukuba qhagamshela kwi-PC ekude kunye nezixhobo zakho zomsebenzi phantse naphi na usebenzisa phantse nasiphi na isixhobo. Unakho ukuqhagamshela kwi-PC yakho yomsebenzi kwaye ube nokufikelela kuzo zonke izicelo zakho, iifayile kunye nezixhobo zenethiwekhi ngokungathi uhleli edesikeni yakho. Ungashiya izicelo zivulekile emsebenzini kwaye ujonge ezo zicelo zisekhaya, kuzo zonke iinkonzo ze-RD.
Ideskithophu Ekude yeMicrosoftMahala
Desktop ekude 8
Umthuthukisi: Microsoft Corporation
I-Microsoft Remote DesktopMahala
Nayiphi na idesika
Esinye isicelo esingadingi naluphi na utyalomali ukuze sikwazi ukuqhagamshela kude kwenye ikhompyuter, siyifumana nakweyiphi na idesika, usetyenziso olufumanekayo zombini IiWindows njengeMacOS, iLinux, iBSD yasimahla, iOS kunye ne-Android. Naliphi na idesika lisivumela ukuba sinxibelelane nabanye esisebenza nabo kuxwebhu olunye, ukuhambisa iifayile phakathi kweekhompyuter ezahlukeneyo, kusivumela ukuba silungelelanise ujongano lomsebenzisi, urekhode unxibelelwano olwenziwe ... ezi ndlela zokugqibela ziyafumaneka kuhlobo iyafumaneka kwiinkampani, ingxelo engahlawulelwayo, njengoko kunjalo kuleyo ibonelelwa yiQelaViewer.
AnyDesk, isoftware ekude yedesktop
Umthuthukisi: Nasiphi na isoftware GmbH
AnyDesk desktop ekudeMahala
Umphathi weDesktop ekude
Umphathi weDesktop ekude (i-RDM) ubeka lonke unxibelelwano olukude kwiqonga elinye ekwabelwana ngalo ngokukhuselekileyo phakathi kwabasebenzisi nakulo lonke iqela. Ngenkxaso yamakhulu eetekhnoloji eyakhelweyo- kubandakanya iiprotocol ezininzi kunye neeVPNs- kunye nezixhobo ezakhelwe-ngaphakathi zeshishini lokulawula iphasiwedi, igranular kunye nolawulo lokufikelela kwinqanaba lehlabathi, kunye nokusetyenziswa okunamandla kwesoftware ukuncedisa abathengi be desktop kwiWindows kunye neMac, RDM yinkemba yomkhosi waseSwitzerland yokufikelela kude.
Umphathi weDesktop ekude Iyafumaneka simahla ngaphandle kokusebenzisa izinto ezingezizo ezobugcisa kunye namaziko emfundo. Iyahambelana neWindows, i-MacOS, i-iOS kunye ne-Android.
Iperus Desktop ekude
I-Iperius Remote yinkqubo elula kwaye eguquguqukayo esivumela ukuba sinxibelelane ngokude kuyo nayiphi na ikhompyuter yeWindows okanye iseva. Ukufakwa akukho nzima kwaye kusivumela ukuba senze ugqithiso lwefayile, iiseshoni ezininzi, ukufikelela ngokuzenzekelayo kude, iintetho kunye nokwabelana kwescreen.
Ekuphela kwento esinokuyifumana ngale nkonzo kukuba ngalo mzuzu ehambelana kuphela neekhompyutha WindowsKe, ukuba unayo iMac emsebenzini, kuya kufuneka ukhethe esinye sezisombululo ezahlukeneyo esizibonisileyo ngasentla. Ngokubhekisele kwizixhobo, ii-mobiles, sinokusebenzisa i-iPhone yethu okanye i-Android ukunxibelelana ukude.
Umthuthukisi: Ngenisa iSoftware
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » Uyilawula njani iPC yakho ukude
I-Huawei P40 Lite E: Iikhamera ezintathu ngexabiso eliphantsi